Professional Hot Tengesai Yakachipa Bonnell Chitubu Mateti Kune Africa vagadziri | Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa Nyanzvi Inotengesa Tengesa Yakachipa Bonnell Chitubu Mattress Kune Africa vagadziri
Iyo chigadzirwa inoratidzirwa nekuvandudzika kwayo kushanduka. Iyo inokwanisa kutsigira akawanda madhiri ekupedzisa akasiyana marudzi emabasa akawanda.
Vatengi vanoda kuziva zvakawanda nezve yedu nyowani chigadzirwa kana kambani yedu, taura nesu chete. Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezveyedu, tifonere isu zvakananga. Mushure memakore ekuvandudza, isu tasimbisa kwenguva refu kudyidzana hukama nevatengi vedu pasirese. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuti tine kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu uye hapazove nekukuvara kwakaitika kune izvo zvakaunzwa zvinhu. Isu tinogamuchira nemoyo wese kubvunza kwako uye kufona.
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira? LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri pamusoro pemakopi ezvinyorwa zvekutumira witinin mazuva manomwe ekushanda. 1.Pa katoni padenga rakatsetseka mukamuri rako rekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Chengera nekuchengetera bhegi rekunze nekero uchiva nechokwadi chekuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga. 3. Bvisa kunze kwemetiresi-yakavharwa pametiresi pamubhedha wako 4Chenjerera cheka bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo machira achangotanga kuparara, Bvisa bhegi repurasitiki. 5. Bvumira maawa makumi maviri nemana kuti metiresi yako nyowani iwedzere zvizere. Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye isu tinogona kuronga mota kukusimudza.